Olee ọrụ na Pinterest | Martech Zone
Izu a, a kpọrọ m ka m nọrọ na otu panel na-agwa ndị okike mpaghara okwu (ọdịyo dị ebe a) na nzute na Magazinekpụrụ Magazine. Ikekwe karịa otu ọ bụla ọzọ, ndị okike nwere ohere dị ịtụnanya iji wee rie uru nke ndị na-elekọta mmadụ anya dịka vine, Instagram or Pinterest.
a nkọwa ndu ndu ka ndị ọrụ si eji pin, mbadamba, ndị ọrụ ndị ọzọ na ụdị na Pinterest na-emekọrịta ihe. Site na Ọchịchọ
Nchịkọta ọnụ ọgụgụ mbụ na Pinterest kwuru banyere nnabata ngwa ngwa nke ndị omenkà, ndị omenkà na ndị fashionistas. Agbanyeghị, mgbe anyị bidoro nke anyị Infographic Ahịa boardgbọ mmiri, anyị juru anyị anya na oke okporo ụzọ anyị na-enweta. Pinterest bụ ihe ngosi dị ike dị egwu n'ihi na ọ dị mfe iji ihu ọtụtụ narị anya ruo mgbe mmadụ jidere anya gị.
Tags: mmekoritana -eji Pinterest eme ihePintereststats pinterest
Aha ya bụ Amber Nicole Garza
Feb 26, 2013 na 2:51 PM
Ọ ga-amasị m ịmalite ịkọ banyere na m bụ ọkpọ maka info-graphics so, n'ezie m ga-agụ nke a!
M hụrụ n'anya Pintrest na dị ka nwanyị, nwa akwụkwọ mahadum m na-etinye nnọọ a bit nke oge "pinning". Dịka onye mmụta mmekọrịta ọha na eze na nwa akwụkwọ mgbasa ozi, enweghị m ike ịjụ mana ịdị na-achọ ịma ọrụ Pintrest na-emetụta omume ndị ahịa. Echere m na saịtị ndị dị ka Pintrest bụ ụzọ dị mma iji nweta mgbasa ozi n'efu! Echere m na ọdịnihu ga-abụ ọtụtụ ụzọ ụzọ okike iji zoo mgbasa ozi na mgbasa ozi na ndụ ndị mmadụ, na-agbagharị gburugburu mgbasa ozi.